Valentine's Day | प्रणय दिवस | २०७८ फागुन २ | Hamro Patro
माघ शुक्ल त्रयोदशी
प्रणय दिवस ( Valentine's Day )
प्रणय दिवस - Valentine's Day
प्रणय दिवस विशेष अडियो सामग्री
जति बाँधी राखूँ भन्छु उति उड्छ मन यो
छाया एउटा सधैँ डुल्छ, जहाँ जहाँ म डुले
फूल भुल्यो भँवरामा, कुन्नि के मा म भुले ??
यो फूल र प्रीतियुक्त गीतले आजको दिनको मादकता अनि रसिकता बयान गर्छ । डाली–डाली फूलेको फूल अनि भमरासहित पिरतीमा परेको प्रेमी या प्रेमिकाको मनोभावना चित्रण गरिएको यो गीतबाट सुरु गरौँ, आजको दिनमा विशेष शब्दहरू ।
तपाईँले माया गर्नुभएको या तपाईँलाई माया गर्ने अनि एक–अर्कासित माया–प्रेम छँदा छँदै पनि जोडिन नसकेका जीवनका धागा र याद लाखौँ गुलाबका फूलहरूसहित प्रेमपूर्ण यात्रामा किन नहिँड्ने ? माया त माया नै हो, कि कसो ?
हुन सक्छ धेरैमा पहिलो प्रेमको त्यो स्मृति । अनि स्कुलमा किताब साटासाट गर्ने बहानामा पानाभित्र प्रेम पत्र लुकाएको स्मृति । आधुनिक कालमा घण्टौँ घोरिएर शब्द रोजी–रोजी पठाएका मोबाइल म्यासेज । अनि राती राती लुकेर गरेका च्याट । रिप्लाई कुर्दै अनिदो बसेका रातहरू ।
पहिलो भेट, जुधेका आँखाहरू अनि सँगै भएका बेला निस्किएका थुप्रै निःशब्द प्रेम भाषाका पलहरू... । मन परेको केटा या केटीसँगै हुँदा या बोल्दा महसुस हुने काउकुती अनि अनेक भावनाको रमणीय संसारतिर लग्ने, त्यो अर्कै खाले आह्लादित संसार । माया–प्रेमका कथाहरू याद गर्दै मायाका नयाँ आयामहरूको सुरुवात गर्ने, पुराना स्मृति खोतल्ने र प्रेमयुक्त खुसी साटासाट गर्ने विशेष दिन हो आज । अर्थात्, ‘भ्यालेन्टाइन डे ।’
हाम्रो मुलुक चाहिँ निकै पछि मात्र भित्रिएको हो, ‘भ्यालेन्टाइन डे ।’ त्यसो त, पश्चिमा संस्कृतिको ‘भ्यालेन्टाइन डे’ नभित्रिँदा पनि माया–पिरती अनेकन् कथा हुन्थे नै । केवल पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ताबिच अलि फरक शैली मात्र फरक न हो । प्रेम–प्रीतिका दृश्य र शैली बद्लिएका मात्र त हुन् नि ।
पश्चिमी सभ्यताबाट आयातित ‘डे’ को हल्का टिप्पणी गर्दै ‘भ्यालेन्टाइन डे’को आलोचना गर्ने पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्त छन् । माया–प्रीति तोकिएको दिन या कुनै विशेष समय भन्दा पनि निस्वार्थ भावले सँधै भरि अँगाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पनि छन् । तर कुनै दिन मायाकै कुरा गरिन्छ र पिरती आत्मसात् गरिन्छ भने यो ‘दिन विशेष’सँग किन रोष राख्नुपर्यो र ? मायाको यो दिवस हामी सबैलाई मीठै लाग्छ, होइन र ?
पुस्ता–पुस्तान्तरमा भाका, भाषा, शैली फरक भए पनि माया–प्रेमका कहानी नबोक्नेहरू बिरलै पात्र हुन्छन्, महिला हुन् कि पुरुष । समाजअनुरूप कहीँ खुला त कहीँ लुकी–चोरी प्रेम–प्यार साटासाट भएकै हुन्छन् । प्रेम सफल भएर जीवनको गोरेटोमा सहयात्राका कथाहरू लेखिए होलान् । कति त्यस्ता प्रेमकथा बिचैमा ‘ब्रेक’ पनि लागे होलान् । तर यसको अर्थ संसार सकिएको हुँदैन । तपाईँलाई माया गर्ने पात्रको कमी हुँदैन । शायद ! तपाईँलाई धेरै माया अर्कै पात्र अन्त कतै कुरिबसेका हुन्छन् ।
एउटा अचम्मको तथ्य के छ भने, ‘संसारमा स्वर्ण अक्षरले कुँदिएका प्रेम कथाहरू संयोगान्त भन्दा वियोगान्त बढी छन् ।’ अर्थात् माया सहज छैन । उदाहरणका लागि भगवान् श्री कृष्ण अनि राधाबिच समेत विवाह भएको थिएन । मुना–मदनदेखि रोमियो अनि जुलियटसम्मले पनि संयोगान्त कथा कोर्न सकेनन् । तर यी प्रेमी जोडीलाई आज पनि संसारले आदर र महत्वका साथ प्रेमीले मनमा अमर राखेका छन् । केवल चोखो माया, अनि चोखो पिरतीका कारण...।
मनै त हो, स्विकारिए पनि या अस्वीकार गरिए पनि आत्तिने या मात्तिने नगरौँ । आफूले एकोहोरो चाहँदैमा त्यो माया प्राप्त हुनै पर्छ भन्ने हुन्न । किनभने प्रेम दोहोरो हुन्छ । अनि मूल कुरो हो, एक–अर्काबिच अचानक जुट्न पुग्ने मनको तार, जुन जब बज्छ थाल्छ । तब सबै प्रेमिल सङ्गीत अपूरा लाग्न थाल्छन् । प्रेम सम्मान हो, विश्वास हो । अनि यो पृथ्वी बाँच्नुको कारण पनि प्रेम हो ।
कुनै बेला इटालीका सम्राट् क्लाउडिअस–२ ले नागरिक विवाहमा प्रतिबन्ध लगाए । उनको यो कदमको विरोधमा उत्रिएर माया अनि विवाहको पक्षमा पादरी भ्यालेन्टाइन उभिए । तर सम्राट्लाई त्यो दृश्य मन परेन । उनलाई जेल हालियो ।
सम्राट्ले भ्यालेन्टाइनलाई बन्दी बनाएर राखे । तर बन्दी गृहकै एक सिपाहीकी छोरीसँग प्रेम रहन गयो । मृत्यु अघि उनले आफ्नी प्रेमीकाका लागि लेखेको चिठ्ठीमा तिम्रो प्यारो भ्यालेन्टाइनका तर्फबाट भनी आफूलाई प्रेषकका रूपमा गरिएको एउटा सम्बोधन....। त्यही सम्बोधन आजसम्म पनि मानव समुदाय अनि प्रेमीहरूले हृदय निकट व्यक्तिलाई आफ्ना भ्यालेन्टाइनका रूपमा सम्झिने गरिन्छ । उनै सन्त पादरीको बलिदानको सम्मानमा आज संसारभरि प्रेम–दिवस मनाइन्छ । उनले विश्वभर प्रेमी–प्रेमिकाका सन्त संरक्षकको पहिचान कमाए ।
उनैको सन्तको सम्झनामा विश्वभर करोडौँको सङ्ख्यामा भ्यालेन्टाइन डे कार्डहरू, चकलेटहरू, फूलहरू अनि विभिन्न उपहारहरूको आदान–प्रदान गरी यो मायालु दिनको उत्सव मनाइँदै छ ।
मायाका नाममा कुनै दुर्व्यवहार नगरौँ । माया–प्रेमको सम्मान गरौँ । अनि प्रेम पहिचान बनाऔँ । बलजफती प्राप्तिको लालसा प्रेम कदापि हुनै सक्दैन । त्यो अपराध हो, अपमान हो । प्रेमलाई सङ्कुचित र फगत सीमित आकर्षणको घेराभन्दा पर लग्दै पलभरमा संसारै फरक पार्न सक्ने आँखाले हेर्न आवश्यक छ । एकले–अर्कोप्रतिको समर्पण भावसहित अनुभूति भ्यालेन्टाइन जसरी युग युग अमर भई बाँच्नेछ ।
प्रेमलाई केवल प्रेमी प्रेमिकासँग मात्र के जोड्नु, संसारै मायामै अड्केको छ । यहाँका सबै प्राणीहरू बिचमा मायाको शीतल आँचल लहराइरहोस् । माया नै धर्म हो । शक्ति हो अनि शान्ति पनि । माया र आफ्नू मायालुप्रति बफादार बनौँ पनि । माया गरेको मान्छेसँग टाढा हुनुहुन्छ भने एक फेर बात मारेर बत्ताइदिनुहोस् । तपाई कति माया गर्नुहुन्छ भनेर ? भेट्न सम्भव छ भने भेटिदिनुहोस् । एक कप चिया मात्रै साथमा खाए पनि हज्जारौं वर्षलाई पुग्ने गरी माया मुटुभरि भर्नुहोला ।
हाम्रो पात्रोका लागि सुयोग ढकालले तयार पारिएको आलेख ।